Arakan Indobhasa's Page - Myanmar Network
Arakan Indobhasa's Likes
Arakan Indobhasa's Friends
Arakan Indobhasa has not received any gifts yet
Arakan Indobhasa's Page
Arakan Indobhasa's Discussions
Vocabulary Skills : ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ ဝေါဟာရများ (၂)
Started this discussion. Last reply by Ei Htet Htet Min Oct 17, 2015.2Replies 17 Likes
ဗုဒ္ဓဘာကိုလေ့လာချင်သူများအတွက် မသိမဖြစ်အရေးကြီးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ ဝေါဟာရများကို ဘာသာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များမှ ထုတ်နှုတ်၍ လက်လှမ်းမှီသလောက် စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ prophecy -…Continue
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ ဝေါဟာရများ (၁)
Started this discussion. Last reply by အိမ့်​အိမ့်​မြင့်​​အောင်​ Aug 7, 2016.3Replies 21 Likes
[Zawgyi]ဗုဒ္ဓဘာကိုလေ့လာချင်သူများအတွက် မသိမဖြစ်အရေးကြီးသော ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ ဝေါဟာရများကို ဘာသာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များမှ ထုတ်နှုတ်၍ လက်လှမ်းမှီသလောက် အပိုင်း (၁)အနေနှင့် စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။…Continue
Started Aug 18, 20150Replies5Likes
ယနေ့ သြဂုတ်လ ၁၈ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်ခန့်က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ Sathorn - ဆိပ်ခံတံတားတွင် ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Bangkok Post သတင်းဌာန Learn English…Continue
Only I Know My Disease
Only I Know My Disease (Arakanese Folktale)Ven. Eindobhasa04-12-2014 Once uponatime, there wasaman inavillage. The village was very far from the city. The transportation was very difficult to…Continue
At 16:23 on February 19, 2011, Soe Thiha said…
At 14:34 on October 5, 2010, Soe Thiha said…